'Attack on Titan' dia mahazo ny 'Call of Duty' Crossover amin'ny fanavaozana vaovao - iHorror
Home Games 'Attack on Titan' dia nahazo ny 'Call of Duty' Crossover amin'ny fanavaozana vaovao
by Trey Hilburn III Janoary 12, 2022 238 hevitra
Call of Duty: Vanguard ary Warzone Pacific dia mahazo crossover miaraka amin'ny fihetseham-po mahery vaika anime/manga, Fanafihana Titan. Ny fanavaozana dia hanasongadina ny Operator Daniel Yatsu ao Fanafihana Titan Ny sandan'ny anjara Survey Corps. Ny fanavaozana vaovao dia hanana fanampim-baovao maro koa Call of Aduty: Zombies.
Ao anatin'ny fankalazana Fanafihana an'i Titan vanim-potoana farany, Call of duty dia manampy "Tracer Pack: Attack on Titan Levi Edition Bundle". Ity amboara ity dia miaraka amina singa vaovao 10 izay misy lohahevitra Fanafihana Titan. Ny iray amin'ireo fanampim-panazavana mahafinaritra indrindra dia ny kambana Titan Piercer. Ireo lelany ireo dia azo ampifandraisina amin'ny hetsika famaranana vaovao izay hanome ny mpilalao sary mihetsika haingana amin'ny toetranao amin'ny alàlan'ny "Steel Cut", titan mamono ny fahavalonao.
Ny lisitry ny vaovao Lalao Call of Duty ZombieNy endri-javatra dia rava toy izao:
Anisan'izany ny fampidirana lalao mahazatra tsy misy fiafarana amin'ny "Shi No Numa" ao amin'ny Void Objective vaovao, ny fidirana tsy voahidy amin'ny biraon'ny Von List any Stalingrad, ambaratonga efatra amin'ny fanavaozana Artifact ao amin'ny Tome of Rituals, Pack-a-Punch tokana telo. camos, sy ny maro hafa. Ny Combat Shield sy ny Fanohanana Killstreaks azo atao dia ampiana ihany koa amin'ny fifangaroana, miaraka amin'ny fanamby hamahana ny fitaovam-piadiana ho an'ny Katana sy Welgun SMG vaovao, miampy votoaty be dia be amin'ny asa ho an'ny Season Two.
Ny Vanguard Ny fanavaozana dia ho hita manomboka ny 11 Janoary, amin'ny 9 PM PT raha ny Warzone Pacific Tonga ny 12 Janoary amin'ny 9 PM PT.